दोहोरी गाएर ‘भाइरल’ कमलाको बालसं'वेदनामा खेलबाड: यसरी भयो रुवाउने प्रतिस्पर्धा ! - Rapti Khabar
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/दोहोरी गाएर ‘भाइरल’ कमलाको बालसं’वेदनामा खेलबाड: यसरी भयो रुवाउने प्रतिस्पर्धा !
दोहोरी गाएर ‘भाइरल’ कमलाको बालसं’वेदनामा खेलबाड: यसरी भयो रुवाउने प्रतिस्पर्धा !
काठमाडौँ । सानो उमेरमै आफ्नो पहिचान बनाउन सफल बालगायिका कमला घिमिरेका लागि प्रसिद्धि र सफलता यतिबेला चुनौती बनेको छ ।
यो खबर कुवेर गिरीले रातोपाटीमा लेखेका छन् । ११ वर्षमै लोकदोहोरी मार्फत उनी अहिले ‘सेलिब्रेटी’ जस्तै बनेकी छिन् ।
त्यही भएर मिडिया, अझ खासगरी युट्युव च्यानलहरुको रोजाइमा उनी पर्ने गरेकी छन् । तर, अन्तरवार्ताका नाममा घुमाउरो प्रश्न गर्ने र आफूलाई चाहिएको भाषाशैलीमा बोल्न बाध्य परिस्थिति खडा गरेर सामाजिक मर्यादा र परिवारका सदस्यहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुग्न थालेको स्वयम् कमला बताउँछिन् ।
‘आकाशमा चिल घुम्यो फनन, कान्छा तिम्रो नाम के हो भनन, गलबन्दी च्यातियो तिम्ले तानेर…’ ११ वर्षीय कमलाको उक्त प्रस्तुतिले कार्यक्रममा सबैको ध्यान तानेको थियो । कार्यक्रममा करिब १६ मिनेट जति कमला र अमृतको दोहोरी पनि चल्यो ।
जेलमा समेत आलमले देखाए यस्तो चम’त्कार, के लेखे पत्रमा ?